Home Wararka Gud. Mursal oo goor dhaw saxaafadda la hadli doona & mooshinkii..
Gud. Mursal oo goor dhaw saxaafadda la hadli doona & mooshinkii..
Guddoomiyaha baarlamanka Soomaaliya Maxamed Mursal Cabdiraxmaan ayaa la filayaa in goordhow uu soo saaro war cusub oo ku saabsan mooshinkii laga keenay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmajao.
Wararka ayaa sheegaya in Mursal uu shaacin doono in mooshinka madaxweynaha laga laabtay, oo khilaafkii taagnaa lagu dhameeyey wada-hadal.
Mursal ayaa la sheegay inuu shaacin doono in xildhibaanada mshinka keenay ay ka laabteen, sidaasna uu mooshinki ku buray.
Dad ku dhow guddoomiyaha baarlamanka ayaa sheegay inay jiraan heshiisyo hoose oo la isku afgartay kuwaasi oo dhamaantood salka ku haya xilal siyaasadeed, balse ma jiraan faah-faahin ku saabsan waxa ay yihiin.
Waxaa hadda socda kulamo uu Mursal la leeyahay Xildhibaanadii mooshinka ka keenay Madaxweynaha, waxaana kulanka kaddib laga soo saari doonaa war saxaafadeed ku saabsan in mooshinka uu jabay..
Previous articleMaxaad ka taqaan danaha Mareykanka uu ka leeyahay Soomaaliya (Xog Xasaasi ah)
Next article(Akhriso) Mooshinkii MW. Farmajo oo laga noqday
Faallo: Ciidan XDS oo mushaar iyo Raashin la, aan ah iyo...
Faallo: Burburka Dowladdii Afganistaan iyo Guusha Daalibaan Maxaan ka Baran kannaa?